လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ 5BB – GlobalNet
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အင်တာနက်က လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက် (Basic Need)တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ Internet User တွေ မကြာခဏစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတော့ လိုင်းမကောင်းတာအပြင် လေးလံနှေးကွေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့နည်းလမ်းတွေပါပဲ။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုသုံးတော့မယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် လိုင်းတပ်ဆင်ဖို့အတွက် လနဲ့ချီစောင့်ရတာ၊ လိုင်းမကောင်းလို့၊ တစ်ခုခုအရေးပေါ်မေးစရာပေါ်လို့ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပေမဲ့ မျက်နှာလွဲခဲပစ်အလုပ်ခံရတာတွေကို အဓိကကြုံနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးတဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုက မြန်ဆန်လေ၊ ထိရောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လေ သုံးရတာ စိတ်ချမ်းသာရလေပါပဲ။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့အတွက် 5BB က လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ လိုင်းတပ်ဆင်တာကစလို့ Service မျိုးစုံပြောင်းလဲသုံးစွဲတာအထိ အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Online မှ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တိုက်ရိုက်၀ယ်ယူလိုပါသလား??
လက်ရှိသုံးစွဲနေသော Service Plan အား Plan Upgrade ပြုလုပ်လိုပါသလား??
လက်ရှိသုံးစွဲနေသော Service Plan အား သက်တမ်းတိုးလိုပါသလား??
ယာယီပိတ်ထားသော လူကြီးမင်း၏အင်တာနက်လိုင်းအား ပြန်လည်အသုံးပြု လိုပါသလား??
ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေကို အခကြေးငွေ ပေးစရာမလို၊ အချိန်အကြာကြီးစောင့်စရာမလို၊ ဘယ်မှသွားစရာမလို၊ ဖုန်းဘေလ်ကုန်စရာမလိုဘဲ ပေးထားတဲ့ link တွေကို Online မှ ဝင်ရောက်ဖြည့်လိုက်ရုံဖြင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ 5BB ကိုသုံးပြီး နေ့စဉ်ဘ၀ကို အကျိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
(မြန်မာ့အမြန်ဆုံး #5BB Broadband သည် Global Technology Company ၏ FTTH Internet အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်။)